” နော့ဂြီလနျး အသငျးမှ ဂါနာ ကွယျပှငျ့ တိုကျစဈ ကစားသမား ဆူလီမာနာ ကို အဂေကျြ အသငျး ထကျ လကျဦးမှု ရယူကာ ကို ကွားဖွတျ ချေါယူဘို့. ကွိုးစားနတေဲ့ ယူနိုကျတကျ “ – Sport Gaber
” နော့ဂြီလနျး အသငျးမှ ဂါနာ ကွယျပှငျ့ တိုကျစဈ ကစားသမား ဆူလီမာနာ ကို အဂေကျြ အသငျး ထကျ လကျဦးမှု ရယူကာ ကို ကွားဖွတျ ချေါယူဘို့. ကွိုးစားနတေဲ့ ယူနိုကျတကျ “
ယူနိုက်တက်အသင်း သည် အေဂျက် အသင်းက 12 သန်းနဲ့ ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ နော့ဂျီလန်းအသင်းမှ ဂါနာကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ဆူလီမာနာကို ကြားဖြတ်ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားလျက်ရှိနေတာ တွေ့ရဘာတယ် ။
သတင်းတွေအရတော့ ယူနိုက်တက် အသင်းသည် တနင်္လာနေ့ကဘဲ နော့ဂျီလန်းအသင်း နဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး 19 နစ် အရွယ် သာ ရှိသေးတဲ့ ဂါနာကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ဆူလီမာနာ ကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် ယူနိုက်တက်က အခြေအနေကောင်းနေတာ တွေ့ရဘာတယ် ။
အေဂျက် အသင်းကလည်း ဂါနာကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ဆူလီမာနာ အတွက် ကမ်းလှမ်းမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိအခြေအနေအရ အပြောင်းအရွှေ့ ပျက်ပြယ်ဖို့များလာပါတယ်။
ဂါနာကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ဆူလီမာနာ သည် ဒီရာသီမှာ နော့ဂျီလန်းအသင်းအတွက် 10 ဂိုးသွင်းပြီ3းဂိုးဖန်တီးထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့တစ်မူထူးခြားတဲ့ ခြေစွမ်းတွေကြောင့် အင်အားကြီး အသင်း တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုလည်း ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုတော့ ယူနိုက်တက်နဲ့ အေဂျက် တို့ဆီကနေသာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အေဂျက် က ဂါနာကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ဆူလီမာနာ အတွက် နော့ဂျီလန်းအသင်းတောင်းဆိုတဲ့ ကြေးထက်3သန်းနည်းတဲ့ ပမာဏနဲ့ ကနဦးကမ်းလှမ်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် နော့ဂျီလန်းအသင်း ကတော့ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကိုလည်း နားထောင်လိုနေပါတယ်။
ယူနိုက်တက် အသင်း က တုံ့ပြန်မှုဟာ အေဂျက်စ်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ဂရုစိုက်ဖို့မလိုလောက်အောင် ကောင်းနေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ထိပေးပြီး ကမ်းလှမ်းလိုက်လဲဆိုတာတော့ မဖော်ပြကြပါဘူး။
ယူနိုကျတကျအသငျး သညျ အဂေကျြ အသငျးက 12 သနျးနဲ့ ကမျးလှမျးထားတဲ့ နော့ဂြီလနျးအသငျးမှ ဂါနာကွယျပှငျ့ တိုကျစဈ ကစားသမား ဆူလီမာနာကို ကွားဖွတျချေါယူဖို့ ကွိုးစားလကျြရှိနတော တှရေ့ဘာတယျ ။
သတငျးတှအေရတော့ ယူနိုကျတကျ အသငျးသညျ တနင်ျလာနကေ့ဘဲ နော့ဂြီလနျးအသငျး နဲ့ ဆှေးနှေးမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့ပွီး 19 နဈ အရှယျ သာ ရှိသေးတဲ့ ဂါနာကွယျပှငျ့ တိုကျစဈ ကစားသမား ဆူလီမာနာ ကို ချေါယူနိုငျဖို့အတှကျ ယူနိုကျတကျက အခွအေနကေောငျးနတော တှရေ့ဘာတယျ ။
အဂေကျြ အသငျးကလညျး ဂါနာကွယျပှငျ့ တိုကျစဈ ကစားသမား ဆူလီမာနာ အတှကျ ကမျးလှမျးမှုကို ပွုလုပျခဲ့ပွီးဖွဈပမေယျ့ လကျရှိအခွအေနအေရ အပွောငျးအရှေ့ ပကျြပွယျဖို့မြားလာပါတယျ။
ဂါနာကွယျပှငျ့ တိုကျစဈ ကစားသမား ဆူလီမာနာ သညျ ဒီရာသီမှာ နော့ဂြီလနျးအသငျးအတှကျ 10 ဂိုးသှငျးပွီ3းဂိုးဖနျတီးထားပါတယျ။ သူ့ရဲ့တဈမူထူးခွားတဲ့ ခွစှေမျးတှကွေောငျ့ အငျအားကွီး အသငျး တှရေဲ့ စိတျဝငျစားမှုတှကေိုလညျး ရရှိလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမှနျတကယျကမျးလှမျးမှုတှကေိုတော့ ယူနိုကျတကျနဲ့ အဂေကျြ တို့ဆီကနသော ရရှိခဲ့ပါတယျ။
အဂေကျြ က ဂါနာကွယျပှငျ့ တိုကျစဈ ကစားသမား ဆူလီမာနာ အတှကျ နော့ဂြီလနျးအသငျးတောငျးဆိုတဲ့ ကွေးထကျ3သနျးနညျးတဲ့ ပမာဏနဲ့ ကနဦးကမျးလှမျးမှု ပွုလုပျခဲ့ပမေယျ့ နော့ဂြီလနျးအသငျး ကတော့ ယူနိုကျတကျရဲ့ ကမျးလှမျးမှုကိုလညျး နားထောငျလိုနပေါတယျ။
ယူနိုကျတကျ အသငျး က တုံ့ပွနျမှုဟာ အဂေကျြဈရဲ့ ကမျးလှမျးမှုကို ဂရုစိုကျဖို့မလိုလောကျအောငျ ကောငျးနတေယျလို့ သတငျးတှထှေကျနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျလောကျထိပေးပွီး ကမျးလှမျးလိုကျလဲဆိုတာတော့ မဖျောပွကွပါဘူး။
ယူနိုကျတကျ ပရိသတျတှေ ဦးစားပေး အဖွဈ လိုခငျြနကွေတဲ့ ကစားသမား သုံးဦး